खाएको पच्दैन ! यसरी बलियो बनाउँ पाचन प्रणाली - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
खाएको पच्दैन ! यसरी बलियो बनाउँ पाचन प्रणाली
मेरो लाइफस्टाइल || 13 March, 2021
मिठो र स्वादिष्ट लाग्ने खानेकुरा पाएमा हामी खानमा नियन्त्रण नै गर्न सक्दैनौं । यसरी खानेकुरामा नियन्त्रण गर्न नसक्दा हाम्रो पाचन प्रणालीमा पनि असर परिहेको हुन्छ । पाचन प्रणालीमा हुने गडबढीले केवल शरीरलाई मात्र नभएर दैनिकी जीवनमा समेत असर पुर्याउछ । त्यसैले पाचन प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि हामीले आफ्नो खाने व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
पाचन प्रणालीको खराबी खाएरै हुन्छ भने यसको सुधार पनि खाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आफ्नो पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न यस्ता उपायहरु अपनाए धेरैलाई राम्रो समेत हुन्छ ।
भोक लागेको समयमा मात्र खाने
कतिपय अवस्थामा हाम्रो खाना खाने आ–आफ्नै किसिमको रुटीन हुन्छ । हामी सोही रुटीन फलो गर्दै खान्छौ । रुटीन फलो गरेर खानु भन्दा भोक लागेको समयमा खाना खानु पाचन प्रणालीको लागि राम्रो मानिन्छ । बिना भोकको खाना खाँदा हाम्रो पेटमा खानाको मात्रा बढी भएर पाचन प्रणालीमा समस्या आउछ । हामीले सकेसम्म सुत्नु भन्दा आधा घन्टा अगाडी खाना खानु राम्रो हुन्छ ।
साधारण मसलाको प्रयोग
हामीले दैनिक खाने खानामा मसलाको मात्र बढी भएमा पाचन प्रणालीमा समस्या देखिन्छ । हामीले मसलायुक्त खाना भन्दा झोलिलो खानेकुरा र साग खाएमा हाम्रो पाचनप्रणाली सन्तुलिन हुन्छ । सकेसम्म घरमै आफैंले तयार पारेको मसला केही मात्रमा हालेर खानु पर्दछ । हामीले बढी चिल्लो, पिरो, नुनिलो र सकेसम्म बजारमा पाइने मसलाको कमै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
चिसो पानी भन्दा तातो पानीपिउने
कोल्ड ड्रिंक्सहरु स्वादमा मिठो भएपनि यो हाम्रो पाचन प्रणालीकालागि हानिकारक हुन्छन् । पाचन प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि कोल्ड ड्रिंक्सको सट्टा फ्रेस जुस, चिसो पानी भन्दा तातो पानी पिउने गर्नुपर्छ ।
नियमित व्यायामले जो कोहीलाई पनि स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ र स्वस्थ रहने यो मुल मन्त्र पनि हो । व्यायाम शरिरका लागि कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । त्यसैले व्यायामले शरिरलाई फुर्तिलो मात्र नबनाएर पाचन प्रणालीलाई राम्रो पनि गर्छ । त्यसैले खाना खाई सके पछि केही समय हल्का हिड्डुल गर्नुहोस् । यदि तपाईलाई जिम जान मनपर्दैन भने तपाई साईकिलिङ्ग गर्न सक्नु हुन्छ । यसका साथै पैदाल हिड्न पनि सक्नु हुन्छ ।
पाचन प्रणालीको सुधारका लागि शरीरलाई बेलाबेलामा डिटक्स गर्नुपर्छ । यसका लागि तपाईले लेमानग्रास जूस, स्टीम गरिएको फलको जुस सेवन गर्नु पर्छ । यस्ता कुराहरुको सेवनले तपाईको शरिरमा रहेको नराम्रा तत्वहरुलाई बाहिर निकालेर शरीरलाई स्वस्थ समेत बनाउछ ।